Quidlọ ọrụ na-arụ ọrụ na mmiri Liquid - Ndị na-emepụta ihe dị elu nke mmiri dị mma, ndị na-ebubata ya
Viscous Liquid Fdị Mejupụta Ma Akara Machine - Food Packaging Equipment
Ngwa: Ngwọta Nkwakọ ngwaahịa maka Fluids gụnyere Gels, Nnukwu Ude na Sauces Vetikal ụdị mejupụtara akụrụngwa akachasị abụkarị ụdị akpa akụrụngwa anaghị eburu n'uche maka mmiri mmiri. A na-ejikarị etinye ihe siri ike n'ime akpa, igwe VFFS na-eme nke ọma na ịnye ọnụ ala, nkwakọ ngwaahịa na-agbanwe agbanwe maka ọtụtụ mmiri, gụnyere oke mmiri na viscosity dị elu. GAOGE mmiri nkwakọ igwe na-eme nke ọma na ị na-etinye ude dị ukwuu, gels, sauces with or without particulates, infusions (inc ...
Automatic ketchup Tomato n'ihu mbukota Machine
Igwe akuko tomato ketchup nwere ike ighota uzo di iche iche dika akuku azu, akuku ato na uzo nke ano, nke nwere ike iru ndi ahia di iche iche.
Igwe Mayonezi Na-akwakọba Ihe - Mbadamba Na-akwakọba Mmiri Na Pịọdlị
Ngwa: Maka ijuputa mmiri mmiri, ihe mgbochi, ude mmanụ, Site na piston a na-ebugharị iji chịkwaa olu. Ọkara akpaka nri mmiri mmiri na pedal mgba ọkụ ma ọ bụ akpaka ngụ oge; nwekwara ike ịmekọrịta ya na igwe akụrụngwa akpaka ọzọ dị ka dosing unit maka mmiri dị iche iche. Kwụsị isi abụọ pistin filler maka mmiri na-enweghị mmiri, dị ka mmiri ịnweta, mmanụ oriri, ihe ọ juiceụ juiceụ, ink, ihe nhicha, ihe na-esi ísì ụtọ, mmiri viscous, dị ka ketchup, Mayonezi, ude, bọta, jam, mmanụ a ,ụ, ncha ntutu, wdg. Worki. ..
Liquid Tapawa akpa ndochi akara na Packaging Machine
Automatic Salad n'ihu Packaging Machine
A na-eji igwe eji edozi akpa nri na-eme ka mmiri, gels, mkpụrụ osisi juputara, ude juputara, salsas, hummus, ihe oriri, ihe eji eme salad, sauces, ncha, shampoos, ngwaahịa nlekọta onwe onye, ​​mgbasa, mmanụ, na ndị ọzọ!
1KG Nri Mmanụ Mgbakọ Mbadamba Dual Servo Control
Adabara dosing nke mmiri mmiri na ọkara mmiri mmiri ngwaahịa, dị ka mmanụ a honeyụ, jam, chocolate agbasa, mọstad, ketchup, sauces, wdg…
Automatic Sesame n'ihu Rotary mbukota Machine Premade Ziplock obere akpa mbukota Machine
Ezubere iji nye arụmọrụ kachasị na nlekọta dị mfe, GAOGE Machinery na-adabere na nkà na ụzụ, ịba uru, ntụgharị, na ịdị irè mgbe ị na-enye igwe kachasị mma pistin maka usoro nchịkọta mmiri. Rotary Fill Seal Seal Pistion Filler Liquid & Paste ịmụta High Quality 304 igwe anaghị agba nchara ihe, Nwere Ezigbo Polishing Performance, Big Ọdịdị Quality, Nguzogide Iji corrosion, Okpu Nguzogide. Na-agbaso ọgwụ Gmp / Food Qs Regulatory Req ...
Oyster Sauce Premade obere akpa ndochi Machine na Doypack mbukota Machine
Ngwa Rotary Mejupụta Akara Ayị mmụba Liquid & Paste ịmụta High Quality 304 igwe anaghị agba nchara ihe, Nwere Ezigbo polishing Performance, Big Qualitydị Mma, Nguzogide Iji corrosion, Okpu Nguzogide. Na-agbaso ọgwụ Gmp / Food Qs Regulatory chọrọ. Mfe nhicha, Ọ dịghị mfe ịmị nje, nwere ike idozi nsogbu ịdị ọcha na usoro mmepụta, A ga-eji igwe ahụ eme ihe n'ọtụtụ mmiri dị ka mmiri ara ehi, mmanya vaịn, mmiri, ihe ọ Juụ ,ụ, mmanya na ihe ndị ọzọ. Nwekwara ike jupụta ...
Mọstad Sauce Guzosie obere akpa na-ejuputa na igwe igwe
A na-eji SFL Volumetric Filling Machine eme ihe maka nri, ọgwụ, kemịkal, ihe ịchọ mma na ụlọ ọrụ ndị ọzọ dị iche iche. Panellọ ọrụ njikwa ahaziri ahaziri na-enye ndị ọrụ ahụmịhe ọrụ dị mfe yana njikwa dị irè site na nlekota oru na PLC. SFL na-enye ya onu karịa igwe ndị ọzọ yiri ya n'ụwa. O mezuola iwu GMP niile site na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ anyị kachasị mma na imepụta ngwaahịa ndị na-abụghị nke ọkọlọtọ. Ọ bara uru maka eyedrops, ...
Chocolate n'ihu obere akpa ndochi Machine na Doypack Packaging Machine
Ngwa GAOGE na-emepụta ma mepụta akụrụngwa na-ejuputa nri maka ọtụtụ nri mmiri mmiri, yana ọtụtụ nhọrọ. Ngwunye nri na-ejuputa ihe sitere na GAOGE gụnyere atụmatụ ndị a: Igwe maka ijuputa nri mmiri mmiri na nnukwu ihe (drọm na totes) nke 8G ma ọ bụ karịa, yana obere akpa si 5fl. Nchọpụta na-agbawa mgbawa na-emepụta Nhọrọ maka obere igwe na-arụ ọrụ nrụgide maka tankị na-agbanwe agbanwe Ntinye dị nfe Dị ka omenala ndị na-ebu nri nri ngwa ahịa, anyị nwere ọkachamara na ...
Premade obere akpa Rotary Ata Sauce obere akpa ndochi Machine
Site na igwe anyị na-ejuputa Liquid, SFL bụ ihe na-ehichapụ mmiri na-akpaghị aka, maka mmiri mmiri na ude mmiri na nozzles. Ọzọkwa, ọ na-abịa na nhọrọ nke mgbapụta gia 1.5L 6L 10L yana nhọrọ nke 20L dabere na njuju. Arụ ọrụ site na ihuenyo mmetụ ọ nwere ike ịchekwa ihe karịrị 200 Ezi ntụziaka. Igwe ahụ nwere ikike nke profaịlụ na-ejuputa iji iji teknụzụ na-ejuputa na teknụzụ ruo 60 bpm. N'ikpeazụ, a na-eji ya na ụlọ ahịa ịchọ mma na ụlọ mposi site na ụlọ ọrụ nwere ọkara ...
Sirop obere akpa ndochi akara mbukota Machine
A na-ahazi igwe eji agba mmiri mmiri anyị iji gboo mkpa mgbanwe nke ụlọ ọrụ Syrup. Anyị na-arụpụta ezigbo igwe eji edozi gị sirop juputara mkpa na izute ebumnuche mmepụta gị. Piston filler: Ejiri jupụta site na ngwaahịa ngwaahịa viscosity dị ala ma nwee ike ijikwa ngwaahịa ya na nhọrọ ya. Ha nwere ike ijikwa ọsọ gaa 60 bpm ma nwee ike ijupụta ihe ọ bụla igwe na-erubiga ókè nwere ike mana ọnụ ahịa igwe ahụ dị elu. Ọsọ dị na igwe ndochi a bụ ...